April 2019 - Page 4 of 5 - Puntland Mirror Believable Media Website
April 10, 2019 Puntland Mirror 0
Washington-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Washington kulan kula yeeshay masuuliyiin katirsan Bangiga Adduunka. Sida ay wararku sheegeen, Xasan Cali Khayre iyo guddoomiye ku xigeenka Bangiga Adduunka Hafez Ghanem ayaa kawadahadlay arrimaha la […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Khamiis ah u duulay dalka Isutaga Imaaraatka Carabta. Isaga oo wariyeyaasha kula hadlayay garoonka diyaaradaha Garoowe, Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in safarkiisa Imaaraatka Carabta uu […]
April 7, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa maanta oo Axad ah xarunta madaxtooyada kulan kula yeeshay wefdi ka socda dalka Jarmalka oo ay hoggaaminaysay Annett Günther oo ah safiirka Jarmalka u qaabilsan Soomaaliya. Safiirka […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo Axad ah magacaabay saddex wasiir, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska raysulwasaaraha. Saalax Axmed Jaamac oo horey u ahaa wasiirka shaqada iyo […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa qabtay keyd hub oo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku lahaayeen duleedka Muqdisho. Saraakiisha ciidamada booliiska ayaa sheegay in keydka hubka laga helay god kuyaala deegaanka Ceelasha Biyaha, oo kuyaala duleedka […]
April 6, 2019 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa sheegay in dilkii Paul uu Puntland u soo jiiday sumcad daro. “Dilkii Paul waxa uu u soo jiiday Puntland dhaawac aad u badan, waxa uu ka hor istaagay mashaariic […]
April 5, 2019 Puntland Mirror 0
Washington-(Puntland Mirror) Taliska ciidamada Mareykanka ayaa maanta oo Jimce ah qirtay in labo qof oo shacab ah ay ku dileen duqeyn ka dhacday gudaha Soomaaliya sanadkii 2018. Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa bayaan ay […]
April 4, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah magacowday guddoomiyaha bangiga dhexe. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa loo magacaabay guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya. Magacaabista ayaa waxaa soo jeedisay Wasaaradda Maaliyadda waxaana meelmariyay golaha […]
Nairobi-(Puntland Mirror) Wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa dhiggiisa dalka Kenya Monica Juma maanta oo Arbaco ah kulan kula yeeshay magaalada Nairobi. Labada wasiir ayaa ka wadahadlay sidii loo soo celin lahaa xiriirka […]